DEG DEG: Weerar qaraxyo ku billowday oo Al-Shabaab ku qaaday magaalada Marka | HalQaran.com
Home Wararka Maanta DEG DEG: Weerar qaraxyo ku billowday oo Al-Shabaab ku qaaday magaalada Marka
DEG DEG: Weerar qaraxyo ku billowday oo Al-Shabaab ku qaaday magaalada Marka
Marka (Halqaran.com) – Warar goor-dhow naga soo gaaray Magaalada Marka ee Xarunta Maamulka Gobolka Shabellaha Hoose, ayaa sheegaya caawa in halkaasi uu ka socdo dagaal xoogan oo u dhaxeeya maleeshiyaadka Al-Shabaab iyo Ciidamada dowladda.
Ka hor inta uusan bilaaban dagaalka waxaa Magaalada laga maqlay dhawaqa Qarax xoogan oo lagu weeraray farriisimada Ciidamada Xoogga dalka ay ku leeyihiin Xaafadda Ruusiya ee Magaalada Marka.
Dagaal culus ayaa xigay oo ay maleeshiyaadka Al-Shabaab ku qaadeen xerada, waxaana wararka ay sheegayaan in hubka dagaalka la isku adeegsanayo si weyn looga maqlayo gudaha magaalada.
Ilaa iyo hadda lama hayo faah faahin buuxda oo ku saabsan dagaalka hadda ka socda Magaalada Marka, waxaana aad u xun khadka isgaarsiinta.
Ciidamo kala duwan oo gurmad ah ayaa la soo sheegaya inay ka baxeen deegaano ka tirsan Gobolka Shabellaha Hoose, si ay u gaaraan Magaalada Marka oo uu dagaalka ka socdo.